Fahasamihafana eo amin'ny fanadihadiana momba ny refy sy ny Stoichiometry | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny fanadihadiana momba ny refy sy ny Stoichiometry | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Siansa & natiora / Siansa / Simia / Simia famakafaka / Fahasamihafana eo amin'ny famakafakana refy sy ny Stoichiometry
Fahasamihafana eo amin'ny fanadihadiana dimensional sy Stoichiometry
14 septambra 2019 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny famakafakana ny refy sy ny stoichiometry dia ny famakafakana dimensional dia ny fiovam-po eo anelanelan'ny habetsaky ny singa iray ka hatramin'ny vola mifanaraka amin'izany ao amin'ilay singa ilaina amin'ny fampiasana anton-javatra isan-karazany ary ny stoichiometry kosa dia ny fampiasana ny fifandraisana misy eo amin'ny reactants sy / na ny vokatra amin'ny fiota simika mba hamaritana angona isa ilaina.
Ny teny hoe famaritana dimensional dia tena zava-dehibe amin'ny siansa, indrindra amin'ny sehatry ny fizika. Stoichiometry kosa dia manan-danja indrindra amin'ny simia, momba ny fihenan'ny simika. Amin'ny fampiasana stoichiometry dia azontsika atao ny mamaritra hoe ohatrinona ny reactant reacted hanome ny habetsaky ny vokatra.
2. Inona no atao hoe Fanadihadiana Dimensional
3. Inona no atao hoe Stoichiometry
4. Fampitahana mifanila - Fizahana Dimensional vs Stoichiometry amin'ny endrika Tabular
Inona no atao hoe Fandinihana Dimensional?
Ny famakafakana dimensional dia ny fiovam-po eo anelanelan'ny vola ao anaty singa iray mankany amin'ny vola mifanentana ao anaty singa iray tadiavina amin'ny alàlan'ny anton-drakitra fanovana isan-karazany. Ankoatr'izay, ny teoria fototra ao ambadik'izany dia ny habetsaky ny vatana mitovy toetra dia mitovy refy. Noho izany, azontsika atao ny mampitaha andiam-batana miaraka amina habe ara-batana hafa mitovy refy. Ohatra, ny halavany dia habetsaky ny vatana. Raha omena amin'ny metatra dia azontsika atao ny mampitaha azy amin'ny halavany hafa na dia omena an-tokotany na kilaometatra aza izy. Azontsika atao ny manao an'io fampitahana io amin'ny alàlan'ny fanovana ny metatra ho lasa metatra na ny mifamadika amin'izany. Na izany aza, raha tsy mitovy refy ny habetsaky ny vatana dia tsy afaka ampitahaintsika izy ireo. Ohatra, tsy azontsika atao ny mampitaha ny halavany amin'ny faobe satria samy hafa ny refiny.
Inona ny Stoichiometry?
Ny Stoichiometry dia ny fifandraisana na ny tahan'ny habe eo amin'ny zavatra roa na mihoatra mandalo fiovana ara-batana na fanovana simika. Amin'ity fotokevitra ity dia matetika isika no miatrika ny akora betsaka, ny habetsahana ary ny moles ny akora. Ankoatr'izay, ny fampiasana an'io hevitra io dia toy izao:
Mampifandanja fampitoviana simika
Manova ny grama ho lasa moka, ny mifamadika amin'izany
Fikajiana otrikaina maro an'isa tsy fantatra
Fikajiana ny tahan'ny molar ny fanehoan-kevitra simika
Andeha isika handinika ohatra iray hahafantarana io fotokevitra io. Ho an'ny fanehoan-kevitra A + 3B ⟶ C, ny réactants dia A sy B, izay manome ny C ho vokatra. Eto dia molekiola 3 an'ny B no tokony hihetsika amin'ny molekiola iray an'ny A hanome molekiola iray an'ny C. Ity no fifandraisana stoichiometric misy eo amin'ireo reactants sy vokatra. Ankoatr'izay, raha fantatsika ny habetsaky ny réactant A izay naneho ny réactant B mba hanomezana C, dia azontsika atao ny mahita hoe ohatrinona ny reactant B ilaintsika amin'io fihetsika io. Ohatra, raha 10.0 grama an'ny A dia nihetsika tanteraka tamin'ny habetsaky ny B hanome an'i C, dia mila mahita ny isan'ny molin'ny A isika mba hahitantsika ny habetsaky ny B izay nihetsika tamin'ny A (amin'ny moles). Aorian'izany, dia afaka mahita ny habetsaky ny B amin'ny fampiasana ny mason'ny molekiola ao amin'ny B isika, amin'ny fampiasana ity fampitahana manaraka ity;
aiza ny isan'ny moles, ny m no refesina, ary ny M ny molekiola misy ny reactant.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny fanadihadiana dimensional sy Stoichiometry?
Ny fandinihana ny refy dia tena zava-dehibe amin'ny fizika, raha ny stoichiometry kosa dia zava-dehibe indrindra amin'ny simia. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny famakafakana ny refy sy ny stoichiometry dia ny famakafakana dimensional dia ny fiovam-po eo anelanelan'ny habetsaky ny singa iray ka hatramin'ny vola mifanentana ao anaty singa iray tadiavina amin'ny fampiasana lafin-javatra maro samihafa ary ny stoichiometry kosa dia ny fampiasana ny fifandraisana misy eo amin'ny reactants sy / na ny vokatra amin'ny fiota simika mba hamaritana angona isa ilaina. Rehefa dinihina ny teôria fototra ao ambadiky ny hevitra tsirairay, ny teôria ao ambadiky ny fandrefesana dimensional dia ny habetsaky ny natiora mitovy toetra dia mitovy refy raha ny tey ao ambadiky ny stoichiometry dia ny habetsaky ny réactants dia mitovy amin'ny totalin'ny vokatra.
Famintinana - Fanadihadiana dimensional vs Stoichiometry
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny famakafakana ny refy sy ny stoichiometry dia ny famakafakana dimensional dia ny fiovam-po eo anelanelan'ny habetsaky ny singa iray ka hatramin'ny vola mifanentana ao anaty singa iray tadiavina amin'ny fampiasana lafin-javatra maro samihafa ary ny stoichiometry kosa dia ny fampiasana ny fifandraisana misy eo amin'ny reactants sy / na ny vokatra amin'ny fiota simika mba hamaritana angona isa ilaina.
1. Helmenstine, Anne Marie. "Famaritana Stoichiometry amin'ny simia." ThoughtCo, 6 Janoary 2019, Azo zahana eto .
1. “2280571” (CC0) via Pexels
Fahasamihafana eo amin'ny Adsorption sy Chromatography partition Fahasamihafana eo amin'ny fandrorana sy ny pyrolisis Fahasamihafana eo amin'ny fanadihadiana Volumetric sy Gravimetric Fahasamihafana eo amin'ny fahamarinana sy ny fahamendrehana amin'ny simia Fahasamihafana eo amin'ny fatorana covalent sy ny fifamatorana Dative
Fahasamihafana eo amin'ny mampihomehy sy mampihomehy
Fahasamihafana eo amin'ny Gametogenesis sy ny Embryogenesis
Fahasamihafana eo amin'ny stock dividend sy ny stock split
Fahasamihafana eo amin'ny fiaraha-monina sy ny orientation
Fahasamihafana eo amin'ny Marxisme sy ny Maoismo